Gọvanọ Willie Obianọ mèrè ka mara nke a na njèm ahụ ọ bàgidere nso-nso a, n'iji sị obodo dị iche iche na steeti ahụ 'Ndeewo' maka ịtụrụ ya akwụkwọ n'ùjú na họpụta ọkwa gọvanọ ahụ e mere na ya bụ steeti, bụ nke mere o jiri nweta mmeri dara ụda n'okpuru ọchịchị iri abụọ na otu niile e nwèrè na steeti ahụ.
N'okwu ya n'okpuru ọchịchị Ayamelụm na Oyi n'otu n'otu, bụ ebe ọ bàgidere ya bụ njem nso-nso a, Gọvanọ Obianọ bùnyere ụmụafọ steeti ahụ ụkpa èkèlè maka ezi ntụkwàsị ahụ obi ha nwèrè na ya na otu ndọrọ ndọrọ All Progressive Grand Alliance (APGA), bụ nke ha gosipụtara site n'inye ya nkwàdo dara ụda na ya bụ nhọpụta.
O kwere ha nkwà na ya gà-aga n'ihu n'ọrụ mmepe na ọrụ ọma ndị ọzọ dị iche iche o ji n'aka na ya bụ steeti na ime ka ụmụafọ steeti ahụ gaa n'ihu irita èrèrè nke ọchịchị onye kwuo uche ya, ma kpọkukwazie ha ka ha gaa n'ihu n'ịkwàdo ọchịchị ya na òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA na ịtụnyere ndị niile si n'okpuru òtù ahụ apụta ịzọ ọkwa dị iche iche na nhọpụta ìzùgbe ahụ ga-ewere ọnọdụ n'oge adịghị anya n'ala anyị.
N'okwu nke ya, onyeisi oche otu ndọrọ ndọrọ APGA n'ala Nigeria, bụ Ọzọnkpụ Victor Oye gara n'ihu n'itò ndị ahụ maka ya bụ nkwàdo, ma kpọkuo ha ka mekwa nke ahụ ọzọ na nhọpụta ìzugbe ahụ rugoro eru, ọ bụnadị dịka o mèrè ka ha mara na dịka APGA jì ọkwa ọchịchị na steeti ahụ, na mmadụ ịtụnyere otu ndọrọ ndọrọ ọzọ ga-abụ nnọọ imesàsị ya anya ma ọ bụ ịkwadà mmụọ ya.
Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ihe metụtara okpuru ọchịchị na echichi ọdịnala, bụ Maazị Greg Obi; nke na-ahụ maka ọrụ, bụ Maazị Marcel Ifejiọfọr; onyeisi oche nchere oge n'okpuru ọchịchị Ayamelụm, bụ Maazị Ben Onyeabọr; ògbò ya nke okpuru ọchịchị Oyi, bụ Maazị Nnamdị Nwadịogbu, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ, bụ ndị kpọpụtasịrị ọtụtụ ihe Gọvanọ Obianọ mepụtàgòrò n'ebe na na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ ma kpọkùkwazie onye ọbụla ka ọ kwàdo ya ma tụnyere otu ndọrọ APGA na nhọpụta ahụ rugoro eru a ga-eme n'ala anyị iji wee mee ka ya bụ ezi ọrụ dịgide ma gaakwa n'ihu.